Huawei Mate 20 Lite: njirimara, mpempe akwụkwọ na teknụzụ | Gam akporosis
Huawei Mate 20 Lite bụ ọrụ: 6.3 ″ ihuenyo, Kirin 710, 3.750 mAh batrị na ndị ọzọ
Fewbọchị ole na ole gara aga, ndị Huawei Mate 20 Lite leaked n'ime a ụlọ ahịa online Polish ya na nkọwapụta teknụzụ ya, onyonyo na ọnụahịa ya. Ọ bụ ezie na nke a emeghị ka ọ bụrụ onye ọchịchị, ebe ọ bụ na Huawei enyebeghị ya n'ụzọ nkịtị, ekwentị ahụ na-ekwusi ike otu ụdị agwa ekpughere na nchapu.
Ngwaọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-abịa dịka etiti, dịka ọ nwere ihe eji arụ ọrụ Kirin 710. Tụkwasị na nke a, ọ na-ejikọta ọtụtụ àgwà ndị na-egosi na ọ bụ njedebe dị ike, ọ bụ ezie na-enweghị ebe dị ka elu-elu ụgwọ dị elu, ebe ọ bụ na ekwuputala ya na ọnụahịa dị ọnụ ala ma nwee atụmatụ dị ala karịa nke ụmụnne ya ndị okenye abụọ ga-eweta, di na nwunye 20 na Mate 20 Pro. Mara ya!
Ngwa na-abịa na a Ihuenyo diagonal 6.3-inch nwere mkpebi FullHD + nke 2.340 x 1.080 pikselụ. Emere nke a ka ọ bụrụ akụkụ nke 19.5: 9 ma were 81% nke oghere niile. Ke adianade do, o nwere notch na ya imewe.
Dabere na ike, Nwunye 20 Lite nwere Kirin 710 SoC, chipset asatọ-isi nke nwere ike ịgba ọsọ ruo 2.2 GHz. Ọ na-abịa na ikike 4 GB RAM yana oghere nchekwa dị n'ime nke 64 GB. N'otu oge ahụ, ọrụ a niile na-enye ekele maka batrị 3.750 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 18 watts.
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, onye ọhụụ ọhụụ nke ngwa ahịa ika ahụ na-agba ọsọ Android 8.1 Oreo na EMUI 8.2. Na mgbakwunye na nke a, ọ nwere ihe ntụgharị azụ abụọ nke 20 na 2MP, yana oghere f / 1.8 na ha abụọ, PDAF na-elekwasị anya, uru AI na ọkụ ọkụ. Na ihu, ekwentị nwere igwefoto abụọ nke 24 na 2MP (f / 2.0) na AI na Qmoji 3D.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere onye na-agụ akara mkpịsị aka na azụ, n'okpuru igwefoto, na nwere usoro mmeghe site na inyocha ihu ekele ihu ude technology emejuputa atumatu.
1 Akwụkwọ data Huawei Mate 20 Lite
Akwụkwọ data Huawei Mate 20 Lite
Huawei MATWE 20 LITE
IKIRU 6.3 "na mkpebi FullHD + nke 2.340 x 1.080p (19.5: 9) / 409 dpi
Nhazi Kirin 710 na 2.2 GHz max.
Oghere Nchekwa 64 GB gbasaa site na microSD ruo 256 GB
Ndị isi Azụ: 20 na 2MP (f / 1.8) na PDAF / Ihu: 24 na 2MP (f / 2.0) na AI na 3D Qmoji
UMUAKA 3.750 mAh na ngwa ngwa
OS Android 8.1 Oreo n'okpuru EMUI 8.2
Njikọ 4G VoLTE. Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac dual band (2.4GHz / 5GHz). Bluetooth 5 LE. GPS + GLONASS. Typedị USB-C. NFC
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị aka na-abịaghachi. Ihu ihu maka ịkpọghe.
Mbibi na ibu ibu 158.3 x 75.3 x 7.6 mm / 172 gram
Ndị ụlọ ọrụ Asia ekpugheghị ozi doro anya banyere ọnụahịa ma ọ bụ nnweta Mate 20 Lite na ahịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ụzọ dị iche iche si ekwu na ga-abata na UK na October ma kwụọ ụgwọ ihe dị ka £ 379, nke a chịkọtara n'ihe dịka euro 429 iji gbanwee. Ọ na-abịa na-egbu maramara nwa, sapphire acha anụnụ anụnụ, na platinum gold.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 20 Lite bụ ọrụ: 6.3 ″ ihuenyo, Kirin 710, 3.750 mAh batrị na ndị ọzọ
Firefox ga - ebido igbochi trackers site na 2019